Culimada Puntland oo kasoo horjeestay fanaaniin bandhig faneed ku qabanaya Garoowe - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandCulimada Puntland oo kasoo horjeestay fanaaniin bandhig faneed ku qabanaya Garoowe
Culimada Puntland oo kasoo horjeestay fanaaniin bandhig faneed ku qabanaya Garoowe
August 6, 2016 Abdi Omar Bile Puntland, Somalia 0
Shiikh Maxamuud Xaaji Yuusuf.
Garoowe-(Puntland Mirror) Culimada Puntland ayaa kasoo horjeestay bandhig faneed ay fanaaniin qurbaha kayimid ka dhigayaan magaalada Garoowe.
Shiikh Maxamuud Xaaji Yuusuf oo galabta shir jaraa’id ku qabtay Garoowe ayaa ku tilmaamay bandhig faneedkaas fidno.
“Waxaan awal marba marbay ahayd waxay ku koobnayd in meelo gaar ah intii lagu duubo qalabka warbaahinta laga sii daayo, laakiin in la yiraahdo fagaaraa loo dhigayaa oo magaaladii Garoowe ahayd oo caasimada ahayd oo gabdhihii iyo wiilashii loo fasaxayaa oo lacag lagaga qaadanayaa waa nasiib daro, wax la aqbali karana maahan, ilaahay halaga cabsado, waxaan ka codsanaynaa dowlada in ay joojiso, way ka war hayaan, shacabku in ay ka hortagaan joojiyaan, caruurteena in aanu ka ceshano,” ayuu yiri shiikha.
“War walaaleyaalow gabar wadan gaalo katimid oo halkaas waxay kasoo baratay rabta inaga in ay akhlaaqdeena iyo diinteena ku fasahaadiso oo lacag inagaga qaadato, dadka ma dareenkiiba ka dhintay” ayuu ku daray Shiikh Maxamuud Xaaji Yuusuf.
Fanaanada Nasteexo Indho oo dhawaan timid Garoowe ayaa sheegtay in ay bandig faneed ku qabanayso magaalada, taasoo keentay in culimada ay si adag uga soo horjeestaan.
Gobolada Puntland ayaa bandhig faneedyada noocaan oo kale ah ay ku yaryihiin marka la barbardhigo qaybo kamid ah gobolada Soomaaliya.
Bandhig faneedyo horey ay u damceen in fanaaniin ay ku qabtaan magaalooyin kamid ah Puntland ayaa culumada diinta ka hortageen.
Ugu yaraan lix qof oo ku dhimatay banaanbaxyo ka dhacay dalka Ethiopia
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada amaanka dowlada Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaco ah ku xiray magaalada Muqdisho wariyaha Al Jazeera Xamse Maxamed iyo saaxiibadiis oo ay kamidyihiin sawir-qaade, martigeliye iyo darawal. Kooxda ayaa la xiray iyaga oo [...]
Kismaayo-(Puntland Mirror) Ugu yaraan shan askari oo katirsan ciidanka Danab ayaa lagu dilay weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay Jubbaland, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan laamaha ammaanka. Weerarka ayaa maanta oo Isniin ah ka dhacay [...]